Ukulinganisela isikolo nobomi bentsapho kunokuba ngumngeni, kubafundi be- intanethi . Nangona abantu abadala abadala bekhetha ukuqhubela phambili imfundo kwi-intanethi, bafumana ixesha labo lokufunda liphazamisekile ngabafazi nabantwana abaye baphoswa kwaye abaziqondi imfuneko yokuba "ixesha elilodwa." Nazi iziphakamiso ezimbalwa zokugcina ubudlelwane obuhle kunye abo ubathandayo xa ufunda kwi-Intanethi.
Beka iMigaqo ethile yoMhlaba kuwo onke amaqela
Amathuba uya kufuna uxolo noxolo ukuze usebenze umsebenzi wakho.
Ukubeka amaxesha athile kunye nokuthumela ishedyuli kwisango lakho leofisi (okanye ifriji ekhishini) inokuba yindlela enhle yokwenza ukuqonda okuqhelekileyo kwaye ugcine ukucaphukisa ukudala. Yenza ukuba usapho lwakho lwazi xa uya kuba khona kwaye xa bengakuphazamisi. Ukuba uneseshoni yengxoxo ye-intanethi, umzekelo, unokuba ufuna ukuxhoma "ungaphazamisi" uphawu emnyango. Vumela abantwana bazi ukuba zeziphi iziganeko ezifanelekileyo zokuphazamiseka (ibhere eliphambili elibangela ukuba indlu yangasese iphuluke) kwaye akuphi na into engalungile (banqwenela ngokukhawuleza i-ice cream). Le sitrato iyahamba zombini, nangona kunjalo, kwaye kuya kufuneka ubeke imithetho ethile. Yifumaneke kwintsapho yakho ngexesha lokuchitha iiyure kwaye ubanike ingqalelo abayidingayo. Bazise ukuba banokuba nethemba lokuba uyafumaneka xa uthe uya kuthi, kwaye baya kuba banomdla wokulinda.
Musa ukulibala ixesha lokudlala
Iikhosi ze-Intanethi zingakwazi ukufumana ngamandla kumaxesha amaninzi, ngakumbi ukuba ubhalise kwii-1.
Kodwa, ungabanjwa ngokukhawuleza uze ubalekele ukuzonwabisa. Ukuba kunesidingo, beka eceleni "ubusuku bentsapho" ukuze udlale imidlalo okanye ufumane ukuzonwabisa kunye nabantwana bakho okanye "ubusuku busuku" ukuze uchithe ixesha elincinci kunye neqabane lakho. Uya kufumana ukuphumla okufunekayo kakhulu kwaye baya kukuxabisa ekukuboneni ngesimo sengqondo esincinci.
Ukuba unabantwana abaneminyaka ephakamileyo yesikolo, sebenzisa izifundo zakho ukubeka umzekelo wendlela anokuphumelela ngayo eklasini zabo. Zama ukubeka eceleni ixesha lokufunda nganye ntambama xa ufunda kunye nezingane zakho . Ncedisa i-snack enesondlo (cinga i-smoothie ne-apula kunokuba ubhontshisi obuluhlaza) kwaye udlale umculo ophumayo. Amathuba abo aya kulinganisa izakhono zokufunda ozenzayo kwaye amabakala abo aya kuzuza. Okwangoku, uya kufumana ithuba lokugqiba zakho izifundo xa uchitha ixesha kunye nezingane zakho. Kuphumelele.
Ukubandakanya Intsapho Yakho KuFundo
Musa ukucima nje kwigumbi elingaphandle uze uphume, uphawule amehlo kunye noxolo, emva kweeyure ezimbalwa zokufunda ngokukhawuleza. Yenza intsapho yakho yazi ukuba ufezekisa into enentsingiselo. Ukuba ufumana into enomdla, yikhuphe kwitafile yokutya okanye uyixoxe ngenkathi uqhuba abantwana bakho esikolweni. Vumela iqabane lakho lifake kwi-intanethi ukuya kwii-museum zezobugcisa okanye isiluleko se sixeko. Amathuba aya kukuzonwabisa ukubandakanyeka kule nxalenye yobomi bakho kwaye uya kuxabisa ithuba lokuwabelana ngawo.
Funda ukungafani phakathi koLuntu, uMqulu kunye neZikolo ezizimeleyo
Ngaba I-Honda Yakho Inenkathazo Eqala Ngethuba Injini iyishushu?
I-Biography kaJean Paul Sartre